कला / साहित्य – Page9– Nepal Parikrama
आलियाको घरमा बोलाइने नाम आलु
मुम्बई–बलिउडमा राम्रै चर्चा कमाएकी नायिका हुन् आलिया भाट । आलिया बलिउडमा क्युट गर्ल भनेर पनि चिनिन्छ । उनलाई घर बाहिर सबैले आलिया भनेर बोलाउने गरेपनि उनलाई परिवारका सदस्य आलु भनेर बोलाउने गरेका छन् । तर उनको यो नाम बाहिर त्यति चर्चामा छैन ।
साम्राज्ञीले देखाइन् शुभ–संकेत ‘ड्रिम्स’ले प्रमाणित गर्‍यो अनमोलको ‘स्टारडम’
काठमाडौं–फागुन,२७ । गत फागुन २० गतेबाट प्रदर्शनमा आएको अभिनेता भुवन केसी निदेर्शित तथा निर्मित चलचित्र ‘ड्रिम्स’ले दर्शकको अपार साथ पाएको छ । भुवन केसीको डेब्यु निर्देशन रहेको चलचित्रमा मुख्य कलाकार अनमोल केसी बाहेक दुई नायिकाले पनि यसै चलचित्र बाट डेब्यु गरेका छन् । छोटो भुमिकामा भिजे सन्ध्या केसी प्रस्तुत भएकी छिन् । तर,फिल्मकी मूख्य हिरोईनका रुपमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह छिन् । साम्राज्ञीले
राजेशले हल्लाए यूकेको रिडिङ !
काठमाडौं । केही समयदेखि सांगीतिक भ्रमणका क्रममा विदेशमा रहेका ‘राई इज किङ’ अर्थात राजेश पायल राइले साइप्रस, मलेशिया, हङ्गकङ्गका विभिन्न शहरहरुमा सफल र लोकप्रिय प्रस्तुति दिईसकेका छन् । सांगीतिक भ्रमणकै क्रममा पछिल्लो समयमा युके पुगेका लोकप्रिय गायक राजेशले त्यहाँ पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुति दिन भ्याएका छन् । यस्तै क्रममा उनले बेलायतकोे सांगीतिक भ्रमणलाई रिडिङमा भव्य तथा सभ्य प्रस्तुति दिए
मोडलिङ र अभिनय रहर मात्रै उद्देश्य भने कुशल गायिका बन्नु हो : सुजाता
काठमाडौं । नेपाली कला क्षेत्रमा नयाँ प्रतिभाहरुको आगमन बढ्दो छ । कसैले पाइला टेक्न नपाउँदै पलायन भएका छन् त कसैले आफ्नो भविष्य नै कलाकारितालाई बनाएका छन् । मोडलिङ, गीत–संगीत र गायनमा करिअर बनाउने अभिलाषाले रंगीन दुनियाँमा पाइला टेकका कलाकारको भीडमा सुजात केसी जमेकै छिन् । मोडलिङ, अभिनय र गायन तीन विधालाई अँगालेकी सुजाताले ‘सूर्या’ नामक नेपाली चलचित्रमा पाश्र्वगायनसँगै अभिनयसमेत गरेकी छन् । यिनै सु
स्वेताका हातमा रहेको टाटुको अर्थ के होला ?
काठमाडौं । स्वर्गीय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि लामो समयसम्म सार्बजनिक कार्यक्रममा सहभागी नभएकी अभिनेत्री स्वेता खड्का विस्तारै सामाजिक कार्यमा सामेल हुन थालेकी छन् । हालै राजधानीको लाजिम्पाटस्थित दरबार रोधी घरको उद्घाटनमा उनी पारिवारिक सदस्यकासाथ सहभागी भएकी थिइन् । सो कार्यक्रममा उनी हर्षित मुद्रामा थिइन् । कार्यक्रमको उद्घाटन पछि उनले कलाकारितामा आफू सँधै सँगै रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर
रेखाको नयाँ फण्डा, ‘रामप्यारी’कै लागि फेरि बनिन् शिवभक्त
काठमाडौं । निमात्री तथा नायिका रेखा थापा आफ्नो पछिल्लो चलचित्र ‘रामप्यारी’का लागि अनेक फण्डा अपनाउन थालेकी छन् । हालै सम्पन हिन्दू नेपालीहरुको महान पर्व शिवरात्रीको अवसर पारेर उनले पशुपति पुग्दै बाबाहरुजस्तै बन्दै नौलो फण्डा अपनाएकी हुन् । दुई बर्ष अघिको शिवरातत्रीमा तत्कालीन विकास बोर्ड अध्यक्ष धमेन्ऽ मरवैत्तासाग गााजा तान्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेर त्यो वर्षको शिवरात्रीमा पनि उनी निकै नै शिव
मुम्बई/ पोर्नस्टारबाट बलिउड प्रवेश गरेकी अभिनेत्री सन्नी लियोनी आफ्नो सौन्दर्यप्रति निकै सचेत बनेकी छन् । आफ्नो फिगरप्रति गर्व गर्ने सन्नी फिगर अझै राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्छिन् । उनी फिगरकै कारण उनका कतिपय फ्यान फिदा भएको बताउाछिन् । भारतीय समाचार माध्यमले उल्लेख गरे अनुसार उनी आफ्नो फिटनेशलाई निकै ध्यान दिन्छिन् । खान खाने तालिका बनाएकी सन्नी उल्लेख नभएको कुरा कहिल्यै खान्निन् । नरिवल पानी उ
बलिउडका तीन खानले कति पढेका छन् ?
मुम्बई/एजेन्सी– बलिउडमा नाम र दाम कमाउन सफल तीन खान अमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान दर्शकको रोजाईमा अग्रणी आउने तीन खान हुन् । उनको अभिनय नरुचाउने सायद कमै हौलान् र उनीहरुले अभिनय गरेका प्राय सबै चलचित्र सफल नै भएका छन् । लामो समयसम्म फिल्मी क्षेत्रमा राज गरेका यी तीन खानको भित्री पाटोका विषयमा भने सायदै कमैलाई थाहा होला । त्यो पाटो भनेको उनीहरुले कति पढेका छन् ? बलिउडमा अभिनयमा प्रसिद्धि कमाएका
नेपाली चलचित्र क्षेत्र बुढो शिशुको अवस्थामा छ : निर्माता राई
नेपाली चलचित्र क्षेत्र अहिले त्यस्तो अवस्थामा छ, जुन अवस्थाबाट चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगकै रूपमा उकास्न ठूलै जोडबल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा बर्षेनी सयौ चलचित्र निर्माण हुने गरेका छन् ति मध्ये अधिकांशले घाटाको व्यापार खेपेका छन् भने केही फिल्मले बल्ल तल्ल लगानी उठाउने गरेका छन् । बर्षमा २ देखि ५ वटा फिल्मले मात्र व्यवासायिक सफलता हात पार्ने गरेका छन् । झ्ट हेर्दा नेपाली फिल्म बजारमा बौद्धिक, व्